मारियो Villén Lucena। Nazarí को लेखक संग साक्षात्कार | वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: मारियो Villén Lucena। फेसबुक प्रोफाइल।
मारियो Villén Lucena, ग्रेनाडामा जन्मेको विधा लेखक ऐतिहासिक, पहिले नै केहि उपन्यास प्रकाशित गरीएको छ। अन्तिम एक हो नास्रीद, ग्रेनाडा को अमीरात को स्थापना को बारे मा एक उपन्यास, जो संग ग्रेनाडा को ढाल y आगो को 40 दिन, पनि समय मा सेट। मँ साँच्चै समय र दयालुता तपाइँ यस मा बिताएको कदर गर्दछु साक्षात्कार जहाँ उनी उनीहरुको बारेमा र सबै कुरा को बारे मा थोरै कुरा गर्छन्।
मारियो Villén Lucena - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: नास्रीद तपाइँको नयाँ ऐतिहासिक विधा उपन्यास हो। तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र विचार कहाँ बाट आयो?
मारियो विलिन लुसेना: कथा Nazarí मा भनिएको छ जब म मेरो पहिलो किताब को लागी दस्तावेजीकरण गर्दै थिएँ म यो भर मा आए, दस बर्ष भन्दा पहिले। त्यसबेला म यो लेख्न को लागी तयार भएको महसुस गर्दिन, तर धेरै बर्ष पछि, फिल्म को काम सकिए पछि, म यो मा काम गर्न थाले।
यस पुस्तक मा ग्रेनाडा को Nasrid अमीरात को आधार र राजवंश को उत्पत्ति हो कि यो दुई र एक आधा शताब्दी भन्दा बढी को लागी शासन गरीयो। पहिलो Nasrid अमीर थियो इब्न अल अहमार। लास Navas de Tolosa को युद्ध पछि, उहाँले अल Andalus को अवशेषहरु लाई इकट्ठा गर्न र उनीहरु संग एक बलियो अमीरात को रूप मा व्यवस्थित। अरु थुप्रै कुराहरुको बीचमा, उनले सुरु गरे Alhambra को निर्माण.
सीमा को अर्को पट्टि, को कथा फर्डिनान्ड तेस्रो, त्यो निश्चित Castilla र León एकीकृत, र Cordoba, Jaén र Seville को रूप मा यस्तो महत्वपूर्ण स्थानहरु लाई जित्यो।
MVL: मैले पढेको पहिलो किताब हो वास्तुकार र अरब का सम्राट। यो एक युवा संग्रह मा प्रकाशित भएको थियो, तर मलाई लेखक याद छैन।
मैले लेखेको पहिलो कुरा थियो मृत्यु को बारे मा कविता, ११ वा १२ बर्ष भन्दा थोरै संग। थोरै उदास।
MVL: म दुई उद्धरण गर्नेछु: अमीन मालोफ y तारिक अली। दुबै एक धेरै गीतात्मक ऐतिहासिक उपन्यास लेखेका छन्, पात्रहरु र उनीहरुको भावनाहरु लाई धेरै ध्यान दिएर। मलाई उनीहरुको वर्णन गर्ने तरिका मन पर्छ। उनीहरु दुबै अल Andalus को बारे मा लेखेका छन्।
MVL: उमर, को अनार को छाया मा। मैले स्वीकार गर्नु पर्छ कि मैले यसलाई मेरो एक पात्र को निर्माण को लागी एक सन्दर्भ को रूप मा लिएको छु ग्रेनाडा को ढाल। उहाँको व्यक्तित्वले मलाई लोभ्यायो।
MVL: म सामान्यतया प्रयोग गर्दछु संगीत लेख्न, मलाई प्रेरित गर्न र कष्टप्रद शोर हटाउन। त्यसबाहेक, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ कुनै उल्लेखनीय उन्माद छैन।
मेरो पठन को बारे मा, म सामान्यतया मा पढ्छु दलाल र म नियन्त्रण गर्दैछु प्रतिशत पढ्दै। मँ एक दैनिक ताल थोप्ने कोसिस गर्छु र म यसको अनुपालन गर्ने कोशिश गर्छु, तर म या त विषय संग जुनूनी छैन।
MVL: मलाई लाग्छ कि समय को कमी, हाम्रो दिनहरु को एक नराम्रो, यसको मतलब यो हो कि म धेरै धेरै squeamishness छैन जब यो लेख्ने वा पढ्ने को लागी आउँछ। कहीं र कुनै पनी समय उनीहरु लायक छन्। यदि तिनीहरूले मलाई एक विकल्प दिए, म रुचाउँछु बिहान पहिलो कुरा लेख्नुहोस्, मात्र जागृत।
MVL: ऐतिहासिक एक मेरो मनपर्ने छ, तर म पनि मनपर्छ समकालीन उपन्यास। म लगभग सबै पढे, तर पल मा मँ मात्र एक ऐतिहासिक उपन्यास लेख्न चाहन्छु। भविष्यमा मँ अरु संग कोशिश गरीरहेछु लि्ग।
MVL: अहिले म पढ्दै छु घोडा निको पार्ने, को गोंजोलो जिनर। म यसलाई माया गर्छु।
म सक्रिय छु एक पांडुलिपि को सुधार चरण र एक नयाँ को लागी कागजात। म विषय सुरक्षित राख्छु ...
MVL: हामी क नाजुक पल प्रकाशन संसारमा। महामारी भन्दा पहिले नै, बजार परिवर्तन भएको थियो। को piracy यो गरेको छ र धेरै क्षति गर्न जारी छ। स्पेन मा तपाइँ धेरै पढ्नुहुन्छ, तर तपाइँ तपाइँले पढ्नुभएको सबै चीज किन्नुहुन्न। महामारीले प्रकाशकहरुको स्थिति झनै बिग्रिएको छ। परिणाम देख्न को लागी रहन्छ, तर यो राम्रो देखिदैन। मेरो बिचारमा, ती बनाइनेछन् बेट र अधिक सुरक्षित, उसले थोरै जोखिम लिनेछ, रन छोटो हुनेछ र कम पदोन्नति मा लगानी गरिनेछ।
MVL: मैले जुन २०२० मा महामारीको बिचमा प्रकाशित गरें, धेरै बन्द किताब पसलहरु र क्षमता को नियन्त्रण संग जसमा उनीहरु खुला थिए। यो एक कठिन वर्ष भएको छ, तर नास्रीद यो बिल्कुल खराब भएको छैन। सकारात्मक यो सबै को, के मलाई लाग्छ कि हामी यो स्थिति बाट लिएका छौं ताकि यो हामी संग रहन्छ, हो भर्चुअल घटनाहरू। प्रस्तुतिहरु, साहित्यिक बैठकहरु, वार्ताहरु ... प्रतिबन्धले हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ धेरै रोचक वैकल्पिक मार्ग कि म यो परम्परागत कार्यहरु पूरक गर्न चाहन्छु जब यो सबै हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » मारियो Villén Lucena। Nazarí को लेखक संग साक्षात्कार